Boora'uu nageenya uummata Sudaaniif gareen ABUT harka keessaa akka qabu Itoophiyaatti Ambaasaaddarri Sudaan Kibbaa beeksisan.
Ambaasaaddar Jeemsi Piitaa Moorgaan Dhabbaatta Pireesii Itoophiyaaf yaada kennaniin akka jedhanitti, waliigalteen nageenya Sudaan Kibbaa hogantoota olaanaa garee ABUT'n gaggeeffamuunsaa uummata Sudaaniif bu'aa tokkoyyuu hin gumaachine.
Adeemsi waliigaltee nageenya Sudaan miseensa ABUT kan ta'an Obbo Siyyum Masfiniin taasifamuunsaa, paartiilee morkattoota gidduu yaada waldhahaafi loogummaa gareen kun qabuun bu'aa argamsiisuu hin dandeenye jedhaniiru.
Ministirri Muummee Doktar Abiyyi Ahmad adeemsa waliigaltee nageenyaa Sudaanirratti gocha yakkaa garee gantuu ABUT ilaalchisee ibsa mana maree bakka bu'oota ummataaf kennuusaanii yaadachiisanii, ALA bara 2015tti Finfinneetti waliigalteen nageenyaa Sudaaniifi paartiilee morkattootaa gidduutti taasifamus, loogummaa hoggaanaa juuntichaa Obbo Siyyum Masfiniin dhugoomuu hin dandeenye jechuun ibsaniiru.
Waliigalteen wayita sana mallatteeffames furmaata walitti bu'insaaf yaadame hin fidne ture jedhu ambaasaaddarichi.
Ibsi Doktar Abiyyi waa'eesaniirratti ibse akka isaan gammachiise dubbatanii, biyyootni lamaan walitti dhufeenyasaanii waggoota hedduuf ture cimsuun fedhii ABUT waliin saaxiluufi ummatarraa adda baasuun barbaachisaadha jedhaniiru.
Dhaabbileen idila addunyaa lama kan kenna deeggarsa namoomaarratti hojjetan lolli naannoo Tigraay erga eegalee naannicha keessatti hojjettootni isaanii ajjeefamuu ibsan.
Saturday, 12 Dec, 2020